Ngaba Kukho Umbhalo Osetyenziselwa Fayibha yeSityalo ukuze Utshintshe Ipulp Wood?
Leyo iswekile yeswekile! Iswekile yokusela umoba ikwanguludidi lwephepha. Isebenzisa umngxunya weswekile njengengca eluhlaza kwaye ilungiswa kukutyunyuzwa kwe-hydraulic kunye ne-high-sterilisation kwi-concentration ethile. Ukuba ujonga iplastiki enomgangatho opheleleyo, ke le nzame yeswekile ...
Kutheni usenza i-Pulp Tableware nge-Bagasse ingaphezu kweSayensi kuneBurn ...
Ngaba ukutshisa iswekile bagasse kutshiswe ngokuthe ngqo njengamafutha, okanye ukukhupha ifayibha yezityalo kwi-bagasse njengezinto zokugcina izinto zeetafile kunye nokuguqula into eseleyo yezinto eziphilayo ibe yi-biomass energy kuluncedo ngakumbi kuluntu nakwindalo? Nokuba kwenzeka ntoni kumanqaku ombane, ukusetyenziswa kwemithombo yobutyebi ...
Yintoni iPulp Tableware?
Ngoku ngakumbi nangakumbi okusingqongileyo kububumnandi bethebhulethi, ingca yetafile yokutyabeka itafile, iswekile yomsipres yetafile, itafile yokuloba imbaza, kunye neebheji zephepha lokupheka, njl njl. Kwimo engqongileyo yokhuseleko lwetafile kunye nemakethi enkulu, abathengi abaninzi abayenzi Yazi uku ...
Kutheni kupakishwa i-Sugarcane Bagasse?
Nangona kusenokwenzeka ukuba kungabikho malunga nokupakishwa kokusetyenziswa okukodwa nangaliphi na ixesha kungekudala, izinto ezisetyenziselwa ukwenza ezi zinto zinokwenza wonke umahluko emhlabeni. I-Styrofoam kunye neplastiki zihlala zingabizi kakhulu kwaye zifumaneka ngokulula kakhulu, kodwa kukho izinto ezinokubakhona ...